Fantatro Ilay Andriamanitra Ivavahako—Tantaran’i Marieta Bacudio
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Cebuano Danoà Espaniola Estonianina Failandey Frantsay Grika Géorgien Hiligaynon Holandey Hongroà Iloko Indonezianina Iokrenianina Italianina Japoney Kinyarwanda Kirghiz Koreanina Kroaty Lingala Litoanianina Malagasy Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Myama Norvezianina Poloney Portogey Romanianina Rosianina Sepedi Serba (Sirilika) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Slovaky Slovenianina Soedoà Tagalog Tiorka Tseky Tsonga Twi Vietnamianina Xhosa Zoloa
Fantatro Amin’izay Ilay Andriamanitra Ivavahako
Notantarain’i Marieta Manuel Bacudio
Nitsidika anay, indray andro, ny Pentekotista iray nalaza ho nahay nanasitrana. Vao nokasihiny aho dia nidiran’ny fanahy ka torana. Rehefa nody ny aiko, dia tsapako hoe lasa nahay nanasitrana aho. Efa niriko hatramin’izay izany. Alohan’ny hitantarako an’izany, dia holazaiko ny mombamomba ahy.
TERAKA tany Ilocos Norte, any Philippines, aho tamin’ny 10 Desambra 1968. Folo mianadahy izahay ary izaho no fahafito. Katolika toa anay ny ankamaroan’ny mponina atỳ. Vita tamin’ny 1986 ny fianarako tany amin’ny lise. Te ho mpitsabo mpanampy aho tamin’izany, saingy tsy tanteraka ilay izy satria narary mafy aho. Nieritreritra mihitsy aza aho hoe ho faty. Kivy be aho ka niangavingavy an’Andriamanitra mba hanampy ahy. Nivoady aho fa raha sitrana dia hanompo azy mandra-pahafatiko.
Sitrana ihany aho nony ela ny ela. Tadidiko ilay voadiko tamin’Andriamanitra, ka nianatra Baiboly tany amin’ny sekoly pentekotista aho, tamin’ny Jona 1991. Nolazaina taminay fa izay nianatra tao dia mahazo “fanomezana, dia ny fanahy masina.” Mba te hahazo an’izany fanomezana izany aho satria te hahay hanasitrana. Nianaranay anefa fa mila mifady hanina sy mivavaka raha te hahazo an’izany. Te hiseho tamin’ny olona aho hoe nahazo an’ilay “fanomezana.” Indray andro, ohatra, tamin’ny fotoana fivavahana, dia nijaikojaiko nihaino ny vavaky ny mpiara-mianatra tamiko aho. Niteny mafy mantsy izy. Rehefa akaiky ho vita ilay vavaka, dia niverina haingana nandohalika teny amin’ny toerako aho. Nolazaiko azy avy eo izay nangatahiny tao amin’ny vavaka. Lasa nino àry izy hoe manana an’ilay “fanomezana” aho.
Be dia be ny zavatra tiako ho fantatra tamin’izaho tao amin’ilay sekoly. Anisan’izany ny hoe iza ilay ‘Ray’ resahin’i Jesosy ao amin’ny Matio 6:9, ary ‘anaran’iza’ ilay tokony hohamasinina. Tsy nazava sady tsy nahafa-po ahy ny valin-tenin’ny mpampianatra anay. Nilaza izy ireo fa telo izay iray Andriamanitra ary mistery izany. Nanakorontana ny saiko izany, nefa mbola nanohy ny fianarako ho pasitera ihany aho.
Nahita Vavolombelon’i Jehovah
Nampianarina anay fa ny Vavolombelon’i Jehovah no fivavahana ratsy indrindra. Ry zareo, hono, no antikristy. Lasa tsy tiako maizina àry io fivavahana io.
Nandeha nitsidika ny ray aman-dreniko aho tamin’ny vakansy, tamin’ny taona faharoa nianarako tao amin’ilay sekoly. Fantatr’i Carmen zokinay vavy fa tonga tao an-trano aho ka nankany koa izy. Vavolombelon’i Jehovah vita batisa izy ary mpitory manontolo andro. Nitady hampianatra ahy momba an’Andriamanitra izy ka tezitra be aho sady niteny hoe: “Efa fantatro ny Andriamanitra ivavahako!” Nilelalela aho sady nanambany azy. Natosiko izy avy eo ary tsy navelako hiresaka tamiko intsony.
Rehefa niverina tany amin’ilay sekoly aho, dia nandefasan’i Carmen bokikely hoe Tokony Hino ny Trinite ve Ianao? * Tonga dia naforiporitro ilay izy dia nodorako. Mbola tezitra be taminy mantsy aho.
Tamin’izaho nahazo diplaomana pasitera
Mbola nianatra aho ary nahataona olona vitsivitsy hivavaka tany aminay rehefa nandeha ny fotoana. Faly erỳ aho fa lasa Pentekotista koa ny mamanay sy zokinay lahy.
Nahazo diplaoma tao amin’ilay sekoly aho tamin’ny Martsa 1994. Tamin’izay ilay Pentekotista nolazaiko terỳ am-piandohana no nitsidika anay. Samy te hiaraka taminy daholo izahay mpianatra satria nihevitra izahay fa nahay nanasitrana izy. Niakatra teny ambony sehatra niaraka taminy izahay, ary nitsambikimbikina sy nitehatehaka nanaraka gadon-kira. Nikasika anay tsirairay izy avy eo, ka izay nokasihiny dia nianjera tsy nahatsiaro tena. * Natahotra be aho rehefa nody ny aiko, nefa faly satria nahatsapa hoe lasa nahay nanasitrana.
Nanasitrana ankizivavikely nanavy be aho taorian’izay. Vao nivavaka aho dia tera-tsemboka izy ka tonga dia sitrana. Nihevitra aho fa ho afaka hanatanteraka an’ilay voadiko tamin’Andriamanitra amin’izay. Gaga anefa aho fa mbola nahatsapa ihany hoe nisy banga ny fiainako. Nino aho hoe iray ihany Andriamanitra, saingy tsy tena fantatro hoe iza izy. Nampisalasala ahy koa ny zavatra maro nampianarina ahy tany am-piangonana.
Nanasitrana ankizivavikely nanavy be aho
Niova hevitra aho
Vao mainka aho nankahala Vavolombelon’i Jehovah, rehefa nandeha ny fotoana. Nodorako izay bokin’izy ireo sendra hitako. Nisy zavatra tsy nampoiziko mihitsy koa. Tsy nety nivavaka tany amin’ny Pentekotista intsony ny mamanay ka tezitra be aho. Nianatra Baiboly tamin’i Carmen mantsy izy. Romotra be tamin’i Carmen aho.
Nahita gazety Mifohaza! tany an-tranon’ny mamanay aho taorian’izay. Raha ny fanaoko dia tonga dia nodorako ilay izy. Tiako ho fantatra anefa izay novakiny, ka navadibadiko ilay gazety. Nahita tantarana mpivavaka be izay aho tao. Namaky ny bokin’ny Vavolombelon’i Jehovah izy ary nohamarininy tao amin’ny Baiboly izay novakiny. Resy lahatra izy avy eo fa hay tsy avy ao amin’ny Baiboly ny fampianarana momba ny Andriamanitra telo izay iray sy ny afobe ary ny fanahy tsy mety maty. Gaga be aho. Ireo mihitsy no tiako hazava amiko. Lasa te hahafantatra izay tena lazain’ny Baiboly aho.
Namaky tantaran’olona hafa tao amin’ny Mifohaza! indray aho. Mpisotro toaka be izy sady mpifoka rongony, kanefa niova tanteraka rehefa nianatra Baiboly. Lasa namaky boky hafa an’ny Vavolombelon’i Jehovah aho taorian’izay. Nahita bokikely hoe Ny Anaran’Andriamanitra Izay Haharitra Mandrakizay * aho. Tao no nahafantarako hoe Jehovah no anaran’Andriamanitra. Faly be mihitsy aho nahafantatra ny marina momba an’ilay tena Andriamanitra.—Deoteronomia 4:39; Jeremia 10:10.
Faly be mihitsy aho nahafantatra ny marina momba an’ilay tena Andriamanitra
Mbola namaky boky hafa aho ary niafina rehefa nanao izany. Lasa nahafantatra zavatra be dia be avy ao amin’ny Baiboly aho. Nampianarina anay tany amin’ilay sekoly pentekotista, ohatra, fa i Jesosy no Andriamanitra. Fantatro anefa izao fa “Zanak’ilay Andriamanitra velona” izy.—Matio 16:15, 16.
Nanaiky ihany aho tamin’ny farany
Hitako indray i Carmen tatỳ aoriana. Gaga be izy fa nangataka an’ilay bokikely Anaran’Andriamanitra aho, sady nangataka boky hafa koa. Efa firy taona no nianarako Baiboly tany amin’ilay sekoly, nefa tsy nahafantatra ny marina mihitsy aho fa nohajambaina. Faly be anefa aho izao satria lasa be dia be ny zavatra fantatro. Marina mihitsy ilay tenin’i Jesosy hoe: “Ho fantatrareo ny marina, ary ny marina hanafaka anareo.” (Jaona 8:32) Niova ny fiainako taorian’izay.
Niova ny fiainako rehefa nahalala ny marina aho
Nisy fotoana aho nieritreritra hoe sady hanohy hanao pasitera no hanompo an’i Jehovah Andriamanitra mangingina. Tsapako anefa taoriana kelin’izay fa tsy afaka nampianatra ny fampianaran’ny fivavahanay intsony aho, saingy natahotra aho hoe inona no hivelomako raha miala aho. Ho afa-baraka koa ny fiangonana raha lasa Vavolombelon’i Jehovah ny pasiterany. Nanohy nanao pasitera àry aho saingy tsy nampianatra izay fampianarana diso fotsiny.
Mianatra Baiboly miaraka amin’i Precious
Nasain’i Carmen hivory tany amin’ny Vavolombelon’i Jehovah aho rehefa nihaona indray izahay. Mpankany Laoag any amin’ny foiben’ny fiangonanay aho, ka tany aho no nitady efitrano fivorian’ny Vavolombelon’i Jehovah ary nivory. Tsy nisy nahafantatra mantsy aho tany. Nampifankahalalana tamin’i Alma Preciosa Villarin aho. “Precious” no fiantsoana azy ary mpitory manontolo andro izy. Mbola tsy tia Vavolombelon’i Jehovah aho tamin’izany, kanefa nanaiky hampianariny Baiboly.
Nanam-paharetana be ny rahavaviko rehefa nanazava ny Baiboly tamiko. Hoatr’izany koa i Precious. Nisy fotoana aho tezitra be, na niady hevitra taminy. Indraindray koa aho nivazavaza sady nanizingizina izay nampianarina ahy taloha. Na izany aza, dia tena nanampy ahy hahafantatra ny Baiboly izy. Nitady izay hahasoa ahy foana i Precious sy ny mpiray finoana taminy. Nanetry tena sy nalemy fanahy izy ireo. Nanohina ny foko izany ka lasa te hanompo an’i Jehovah aho.
Tonga saina aho tamin’ny Jolay 1995 fa tsy maintsy miala tsy ho pasitera aho raha te hampifaly an’Andriamanitra. Izao mantsy no lazain’ny Apokalypsy 18:4 momba ny fivavahan-diso: “Mivoaha avy ao aminy, ry oloko, raha tsy tianareo ny hiombona ota aminy, ary raha tsy tianareo hisy hanjo anareo ny loza hanjo azy.” Inona anefa no hivelomako? Fantatro tao amin’ny Hebreo 13:5 fa raha manao ny sitrapon’Andriamanitra aho, dia ‘tsy handao ary tsy hahafoy ahy mihitsy izy.’
Tamin’ny batisanay sy Neny
Lasa nanohitra be ahy ny dadanay sy ilay zokinay lahy noresahiko teo. Tapa-bolana talohan’ny nanaovana batisa ahy anefa, dia sahy nody tany an-trano aho handoro an’izay rehetra nampiasaiko tamin’izaho pasitera. Tsapako hoe niala tamiko ilay hery nahaizako nanasitrana rehefa vitako izany. Nisy zavatra nanindry foana aho taloha, isaky ny natory tamin’ny alina. Tsy misy intsony anefa izany izao. Nahita aloka foana koa aho teo amin’ny varavarankelin’ny efitranoko, nefa tsy miseho intsony izany izao. Rehefa nianatra Baiboly aho, dia fantatro fa hay ny demonia fa tsy Andriamanitra no mahatonga ny olona ankehitriny hahavita fahagagana toy ny fanasitranana. Faly be aho fa afaka tamin’ny demonia, toy ilay ankizivavy fahiny izay nafahan’i Paoly tamin’ny “demonia mpilaza ny hoavy.”—Asan’ny Apostoly 16:16-18.
Efa Vavolombelon’i Jehovah, mpitory manontolo andro
Faly erỳ aho satria niara-natao batisa izaho sy mamanay tamin’ny Septambra 1996, ary lasa Vavolombelon’i Jehovah. Lasa mpitory manontolo andro aho avy eo ary efa taona maro izay no nanaovako izany.
Nanambady an’i Silver aho tatỳ aoriana. Miezaka be izahay mba hampianatra ny zanakay vavy izay lazain’ny Baiboly. Lasa manompo an’i Jehovah koa izao ny zokiko vavy roa sy ny zandriko vavy iray. Malahelo aho satria taona maro no laniko nianarana momba an’Andriamanitra nefa tsy tena fantatro akory izy. Faly be anefa aho izao satria fantatro amin’izay ilay Andriamanitra ivavahako.
Miaraka amin’ny vadiko sy ny zanakay vavy ary ny havanay sasany lasa Vavolombelon’i Jehovah
^ feh. 10 Navoakan’ny Vavolombelon’i Jehovah, fa tsy atao pirinty intsony.
^ feh. 13 Mino ny fivavahana sasany fa mahazo fanahy masina ilay olona, ary tena mafy be ny fidiran’io fanahy io ao aminy ka izany no mahatonga azy ho torana.
^ feh. 18 Navoakan’ny Vavolombelon’i Jehovah.